မိန်းကလေး ငယ်ငယ်တိုင်းအတွက် အရေးကြီးလို့ ကျော်မသွားပဲ ဖတ်ကြည့်ဗျာ (သမီးရှင်တွေ သတိထားဖို့ (နားနဲ့မနာ ဖဝါးနဲ့နာ ပါ)) !!! - Thadin
Homeကြားသိရသမျှမိန်းကလေး ငယ်ငယ်တိုင်းအတွက် အရေးကြီးလို့ ကျော်မသွားပဲ ဖတ်ကြည့်ဗျာ (သမီးရှင်တွေ သတိထားဖို့ (နားနဲ့မနာ ဖဝါးနဲ့နာ ပါ)) !!!
September 30, 2018 kanhtoo shin ကြားသိရသမျှ Comments Off on မိန်းကလေး ငယ်ငယ်တိုင်းအတွက် အရေးကြီးလို့ ကျော်မသွားပဲ ဖတ်ကြည့်ဗျာ (သမီးရှင်တွေ သတိထားဖို့ (နားနဲ့မနာ ဖဝါးနဲ့နာ ပါ)) !!!
သမီးရှင်တွေ သတိထားဖို့ (နားနဲ့မနာ ဖဝါးနဲ့နာ ပါ)
ဒီ​နေ့​ဆေးခန်းမှာ case2ခု တပြိုင်​တည်း ရပါသည်​။
ပထမ case က ၂၃နှစ်​ပါ။
ကျမရဲ့ထုံးစံက ultrasoud ကြည့်​ရင်း early pregnancy ​တွေ့ရင်​ ကိုယ်​ဝန်​ရှိ​နေပြီလို့ တခါတည်း တန်းမ​ပြောပဲ အိမ်​​ထောင်​ရှိလားလို့ အရင်​​မေးတတ်​ပါတယ်​။
အိမ်​​ထောင်​မရှိတဲ့ ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​ တ​နေ့တခြား များလာတဲ့​ခေတ်​ကြီးမှာ လူနာနဲ့အ​ဖော်​ပါလာတဲ့သူကို မသိ​စေချင်​လို့ပါ။
အိမ်​​ထောင်​မရှိဘူးလို့​ ဖြေ​တော့ ရည်းစား​ရောရှိလား​ပေါ့။
ရည်းစားလည်းမရှိဘူး ဆရာမ။ အဲ့သလိုဆိုပြန်​​တော့ မတတ်​နိုင်​​တော့ သမီး ကိုယ်​ဝန်​ ၆လပြည့်​​တော့မယ်​။
အတူ​နေဖူးတဲ့ ယောက်ျား​တော့ ရှိကိုရှိ​နေမှာမို့အဲဒီလူကို လက်​ထပ်​လိုက်​ဖို့ ကြိုးစားပါလို့​ ပြောလိုက်​​ရော.. ဆရာမေ​ရ့ ကူပါကယ်​ပါနဲ့ ငိုပါ​လေ​ရော။
… အဲ့ဒါနဲ့ အဓိက ဘယ်​​သူနဲ့ရတဲ့ကိုယ်​ဝန်​လည်းဆိုတာပဲ အ​ရေးကြီးဆုံး​လေ.. အရင်​ဆုံး လင်​​ကောင်​​ဖော်​ရမှာမို့ ဘယ်​သူနဲ့ရတာလည်းသမီး.. ပထမ​တော့မ​ဖြေပါ….
ကဲ… ဆရာမကိုမ​ဖြေရင်​လည်း အိမ်​ကျရင်​ မိသားစုကို​ဖြေပြီး အဲ့ဒီလူနဲ့ ယူဖို့ စီစဉ်​​ပေါ့လို့​ပြောမှ အိမ်​ကို​ပြောလို့မဖြစ်​ဖူး။
အိမ်​ကို​ပြောရင်​ အ​မေကြီး လဲ​သေသွားလိမ့်​မယ်​.။
ယူလို့လည်းမဖြစ်​နိုင်​ဘူး…ဆို​တော့ ဘယ်​သူဖြစ်​​နေလို့​လည်းသမီးလို့ ကျမထပ်​​မေးမိ​တော့ အကိုဝမ်းကွဲပါတဲ့ .. သမီးတို့အိမ်​က​နေ GTC လာတက်​တာပါတဲ့…။
သမီးတို့ ချစ်​သူ​တွေလားဆို​တော့ မဟုတ်​ဖူးတဲ့။ မဟုတ်​ပဲနဲ့ ဘာလို့ အတူ​နေဖြစ်​တာလည်းလို့ ထပ်​​မေး​ကြည့်​တော့ အိမ်​မှာ အားလုံးအပြင်​သွားတဲ့​နေ့ အကို ကျောင်းကပြန်​လာရင်း သမီးကိုဆွဲပြီး အတူ​နေတာပါတဲ့။ မရုန်းဘူးလား။
မ​အော်​ဘူးလားဆိုတဲ့​ မေးခွန်း​တွေကို ဆက်​မ​ဖြေပဲ ငူငူကြီး ငြ်ိမ်​​နေပုံ​ထောက်​​တော့ သူကိုယ်​တိုင်​က အလိုတူခဲ့ပုံပါပဲ။
အဲ့ဒါနဲ့ အိမ်​ကိုဖွင့်​​ပြောပြီး ယူလိုက်​​တော့​ပေါ့သမီးရယ်​ လို့ပဲ​ ပြောဖြစ်​ပါသည်​..။
သူက​တော့ ယူလို့မရဘူး ​မောင်​နှမဝမ်းကွဲ​တွေမို့ဆိုပြီး ထပ်​ခါထပ်​ခါ​ ပြောလာ​တော့ ယူလို့ ရလို့ ညား​တောင်​​နေပြီသမီး​ရေ… ဒီဗိုက်​က​ နောက်​လဆို ဖုံးလို့မရ​တော့ဘူး။
ဒီလထဲမှာ လူကြီး​တွေဖွင့်​​ပြောပြီး ဆွဲစိထားနိုင်​မှ ရ​တော့မှာ.. အိမ်​ကိုဖွင့်​​ပြောလိုက်​လို့ အကြံ​ပေး​တော့ အိမ်​ကို​တော့ လုံးဝအသိခံလို့မရ..။ ရတယ်​။ သမီးဘာသာ ကြံအုံးမယ်​လို့ ဥာဏ်​ကြီးရှင်​မမက ဆိုပါတယ်​။
ဒီ​နေရာမှာ ကျမ ညီမ​လေး​တွေကို သတိ​ပေးချင်​တာက ဒီလိုပြသနာ ကြုံလာခဲ့ရင်​ အရင်​ဆုံး ကြိုးစားရမှာ လင်​​ကောင်​​ပေါ်ဖို့ က​လေးအ​ဖေ ဖမ်းမိဖို့မို့ ဒီကိစ္စကို အရင်​ဆုံးအသိ​ပေးသင့်​သူ​တွေက ညီမ​လေးတို့ရဲ့ အ​မေနဲ့ မိသားစုဝင်​​တွေကိုပါ။
ကိုယ်​မှ အ​နေအထိုင်​မတတ်​ခဲ့​တော့ ရိုက်​လည်းခဏ​ပေါ့လို့​တော့​ တွေးကြည့်​လိုက်​ပါ။ ဘယ်​အ​မေ ဘယ်​အကိုမှ​တော့ ​သေ​အောင်​ မသတ်​နိုင်​တာမို့ အနီးစပ်​ဆုံးမိသားစုဝင်​​တွေကို အဓိက ယုံကြည်​​ပေးပြီး အကူအညီ​ တောင်း​ပေး​စေချင်​ပါတယ်​။ ​
နောက်​တခုအကြံ​ပေးချင်​တာက ​ရှုပ်​​ထွေးလှတဲ့ အခု​ခေတ်​ထဲမှာ ​သမီးမိန်းက​လေးရှိတဲ့ အိမ်​တိုင်းမှာ ​ယောက်ျားလူပျို လူအို ဘယ်​သူ့ကိုမဆို ယုံကြည်​ပြီး တမိုး​အောက်​ထားမယ်​ဆိုရင်​ သတိကြီးကြီးထားကြဖို့ လိုလာပြီဆိုတာပါပဲ။
ကိုယ့်​သမီး လစဉ်​ရာသီလာ မလာကို တ​စေ့တ​စောင်း အကဲခတ်​ရမှာ လစဉ်​​မေ​မေတို့တာဝန်​ ဖြစ်​​နေပြီ​နော်​။
ကဲ..ထားပါ​လေ။ အဲ့ဒီ သမီးကြံပါမယ်​ဆိုတဲ့ ​ရွှေဥာဏ်​ရှင်​မမ​လေးကို တတ်​သ​လောက်​မှတ်​သ​လောက်​နဲ့ ​ဆွေး​နွေးဖိတ်​​ခေါ် အကြံ​ပေး အပြီးမှာ ကျမ အခြားလူနာ ဆက်​ကြည့်​​နေခဲ့ပါတယ်​။
၁၅မိနစ်​​လောက်​သာခြားပြီး မမ OG ဝင်​လာပါတယ်​ မြတ်​သန့်​​ရေ.. ဒီမှာနင့်​ case ​ဟေ့.. စိတ်​ပျက်​လွန်း​ပေမယ့်​ ​ပေါက်​ကရ​လျှောက်​လုပ်​ရင်​ ငါလည်း ဒုက္ခများမှာမို့ ကိုယ်​တိုင်​လာပို့တာ…ဆိုပြီး ၁၆နှစ်​မပြည့်​​သေးတဲ့​ ကောင်​မ​လေးတစ်​​ယောက်​နဲ့ ဝင်​လာပါတယ်​။.
ရည်းစားလည်းမထားဖူး .. အိမ်​အပြင်​လည်း ထွက်​မလည်​တတ်​တဲ့ က​လေးမ​လေးက ကိုယ်​ဝန်​ .၄လ​ကျော်​နေပြီမို့ပါတဲ့။​ သူ့အ​မေ.. မမ OG နဲ့ ကျမ အစ်​အောက်​​မေးလိုက်​တော့ တရားခံ ထွက်​လာပါတယ်​။ တရားခံက အ​မေရဲ့ အကိုကြီးပါဆို​တော့ ကျမနှုတ်​က​တောင်​ ​သြော်​ ..ဘကြီး​ပေါ့ လုပ်​ရက်​လိုက်​တာလို့ ငြီးမိပါတယ်​။
ငယ်​​ငယ်လေးထဲက ဘဘကလည်းအရမ်းချစ်​ သူကလည်း ဘဘကို အရမ်းချစ်​တာမို့ ဘကြီးက ညအိပ်​ည​နေ သူတို့အိမ်​ကို အလည်​လာတိုင်း မှာ ဘဘရဲ့အိပ်​ရာထဲမှာ အတူသွားအိပ်​ပါတယ်​တဲ့။ ငယ်​စဉ်​ထဲက​ပေါ့။
ဘဘက ဟိုဟိုဒီဒီစမ်း​တော့ သမီးက မလုပ်​ပါနဲ့လို့​ ပြောပါတယ်​တဲ့။ ဒါ​ပေမယ့်​ ဆေးပညာအရ​တော့ အမှန်​တကယ်​ငြင်းဆိုခြင်း မ​မြောက်​ဘူး ​ပြောရမယ်​​ပေါ့။ ဘဘကလည်း ခု​နောက်​ပိုင်း ​ဆေးကုလာတယ်​ဆိုပြီး ခဏခဏ ညအိပ်​ည​နေ လာပါတယ်​တဲ့။
အသက်​ ၇၀ ဘဘခမျာ ​နေသာမ​ကောင်းတယ်​ အစားအ​သောက်​က​တော့​ ကောင်း​နေပုံပဲ။
ဘယ်​လိုပဲ သ​ဘောတူသည်​ဖြစ်​​စေ သ​ဘောမတူပဲ လုပ်​သည်​ဖြစ်​​စေ အဲ့သလို​ ဆွေမျိုးရင်းနဲ့ ကိုယ်​ဝန်​ရတဲ့ မိန်းမငယ်​​တွေဟာ ချစ်​သူနဲ့ ကိုယ်​ဝန်​ရတဲ့သူ​တွေထက်​ ပိုပြီး စိတ်​ထိခိုက်​ခံစားရပြီး ….
အရိပ်​မဲကြီး ပိုကျန်​ရစ်​ခဲ့ပြီမို့ ​မေ​မေတို့အ​နေနဲ့. ကိုယ့်​သမီးလေး ဘယ်​အရွယ်​မဆို ဘယ်​လို ​ယောက်ျားမျိုးနဲ့မှ နှစ်​ဦးထဲလွှတ်​မ​ပေး လွှတ်​မထား​တော့ပဲ သတိကြီးကြီးနဲ့ ထိန်းသိမ်းတတ်​ဖို့ အကြံ​ပေးပါရ​စေ။ ​
နောက်​ပြီး က​လေး​တွေကိုလည်း မိန်းမကိုယ်ကို တင်​ပါးကို ​ပေါင်​ကို ရင်​သားကို ​မေ​မေနဲ့ ဖွားဖွားကလွဲလို့ မည်​သူ့ကိုမှ မပြရ မထိ​တွေ့​စေရ အကိုင်​တွယ်​မခံရ​ကြောင်း တကယ်​လို့ တဦးဦးက အဲ့သလို လုပ်​လာခဲ့ရင်​လည်း​ မေ​မေတို့ကို အရင်​ဆုံး​ပြောဖို့ ငယ်​စဉ်​ထဲက သင်​ကြား​ပေးဖို့ အကြံ​ပေးရင်း….
ဒီ​နေ့ ကျမကြုံ​တွေ့ခဲ့ရတာ​လေး​တွေကို ဗဟုသုတအဖြစ်​​ မျှ​ဝေ​ပေးလိုက်​ပါတယ်​။
ပွင့်​​သောပန်းတိုင်း လှနိုင်​ ​မွှေးနိုင်​ လန်းနိုင်​ပါ​စေ။
သမီးရှငျတှေ သတိထားဖို့ (နားနဲ့မနာ ဖဝါးနဲ့နာ ပါ)
ဒီ​နေ့​ဆေးခနျးမှာ case2ခု တပွိုငျ​တညျး ရပါသညျ​။
ပထမ case က ၂၃နှဈ​ပါ။
ကမြရဲ့ထုံးစံက ultrasoud ကွညျ့​ရငျး early pregnancy ​တှရေ့ငျ​ ကိုယျ​ဝနျ​ရှိ​နပွေီလို့ တခါတညျး တနျးမ​ပွောပဲ အိမျ​​ထောငျ​ရှိလားလို့ အရငျ​​မေးတတျ​ပါတယျ​။
အိမျ​​ထောငျ​မရှိတဲ့ ကိုယျ​ဝနျ​​ဆောငျ​ တ​နတေ့ခွား မြားလာတဲ့​ခတျေ​ကွီးမှာ လူနာနဲ့အ​ဖျော​ပါလာတဲ့သူကို မသိ​စခေငျြ​လို့ပါ။
အိမျ​​ထောငျ​မရှိဘူးလို့​ ဖွေ​တော့ ရညျးစား​ရောရှိလား​ပေါ့။
ရညျးစားလညျးမရှိဘူး ဆရာမ။ အဲ့သလိုဆိုပွနျ​​တော့ မတတျ​နိုငျ​​တော့ သမီး ကိုယျ​ဝနျ​ ၆လပွညျ့​​တော့မယျ​။
အတူ​နဖေူးတဲ့ ယောကျြား​တော့ ရှိကိုရှိ​နမှောမို့အဲဒီလူကို လကျ​ထပျ​လိုကျ​ဖို့ ကွိုးစားပါလို့​ ပွောလိုကျ​​ရော.. ဆရာမေ​ရ့ ကူပါကယျ​ပါနဲ့ ငိုပါ​လေ​ရော။
… အဲ့ဒါနဲ့ အဓိက ဘယျ​​သူနဲ့ရတဲ့ကိုယျ​ဝနျ​လညျးဆိုတာပဲ အ​ရေးကွီးဆုံး​လေ.. အရငျ​ဆုံး လငျ​​ကောငျ​​ဖျော​ရမှာမို့ ဘယျ​သူနဲ့ရတာလညျးသမီး.. ပထမ​တော့မ​ဖွပေါ….
ကဲ… ဆရာမကိုမ​ဖွရေငျ​လညျး အိမျ​ကရြငျ​ မိသားစုကို​ဖွပွေီး အဲ့ဒီလူနဲ့ ယူဖို့ စီစဉျ​​ပေါ့လို့​ပွောမှ အိမျ​ကို​ပွောလို့မဖွဈ​ဖူး။
အိမျ​ကို​ပွောရငျ​ အ​မကွေီး လဲ​သသှေားလိမျ့​မယျ​.။
ယူလို့လညျးမဖွဈ​နိုငျ​ဘူး…ဆို​တော့ ဘယျ​သူဖွဈ​​နလေို့​လညျးသမီးလို့ ကမြထပျ​​မေးမိ​တော့ အကိုဝမျးကှဲပါတဲ့ .. သမီးတို့အိမျ​က​နေ GTC လာတကျ​တာပါတဲ့…။
သမီးတို့ ခဈြ​သူ​တှလေားဆို​တော့ မဟုတျ​ဖူးတဲ့။ မဟုတျ​ပဲနဲ့ ဘာလို့ အတူ​နဖွေဈ​တာလညျးလို့ ထပျ​​မေး​ကွညျ့​တော့ အိမျ​မှာ အားလုံးအပွငျ​သှားတဲ့​နေ့ အကို ကြောငျးကပွနျ​လာရငျး သမီးကိုဆှဲပွီး အတူ​နတောပါတဲ့။ မရုနျးဘူးလား။
မ​အျော​ဘူးလားဆိုတဲ့​ မေးခှနျး​တှကေို ဆကျ​မ​ဖွပေဲ ငူငူကွီး ငျွိမျ​​နပေုံ​ထောကျ​​တော့ သူကိုယျ​တိုငျ​က အလိုတူခဲ့ပုံပါပဲ။
အဲ့ဒါနဲ့ အိမျ​ကိုဖှငျ့​​ပွောပွီး ယူလိုကျ​​တော့​ပေါ့သမီးရယျ​ လို့ပဲ​ ပွောဖွဈ​ပါသညျ​..။
သူက​တော့ ယူလို့မရဘူး ​မောငျ​နှမဝမျးကှဲ​တှမေို့ဆိုပွီး ထပျ​ခါထပျ​ခါ​ ပွောလာ​တော့ ယူလို့ ရလို့ ညား​တောငျ​​နပွေီသမီး​ရေ… ဒီဗိုကျ​က​ နောကျ​လဆို ဖုံးလို့မရ​တော့ဘူး။
ဒီလထဲမှာ လူကွီး​တှဖှေငျ့​​ပွောပွီး ဆှဲစိထားနိုငျ​မှ ရ​တော့မှာ.. အိမျ​ကိုဖှငျ့​​ပွောလိုကျ​လို့ အကွံ​ပေး​တော့ အိမျ​ကို​တော့ လုံးဝအသိခံလို့မရ..။ ရတယျ​။ သမီးဘာသာ ကွံအုံးမယျ​လို့ ဉာဏျ​ကွီးရှငျ​မမက ဆိုပါတယျ​။
ဒီ​နရောမှာ ကမြ ညီမ​လေး​တှကေို သတိ​ပေးခငျြ​တာက ဒီလိုပွသနာ ကွုံလာခဲ့ရငျ​ အရငျ​ဆုံး ကွိုးစားရမှာ လငျ​​ကောငျ​​ပျေါဖို့ က​လေးအ​ဖေ ဖမျးမိဖို့မို့ ဒီကိစ်စကို အရငျ​ဆုံးအသိ​ပေးသငျ့​သူ​တှကေ ညီမ​လေးတို့ရဲ့ အ​မနေဲ့ မိသားစုဝငျ​​တှကေိုပါ။
ကိုယျ​မှ အ​နအေထိုငျ​မတတျ​ခဲ့​တော့ ရိုကျ​လညျးခဏ​ပေါ့လို့​တော့​ တှေးကွညျ့​လိုကျ​ပါ။ ဘယျ​အ​မေ ဘယျ​အကိုမှ​တော့ ​သေ​အောငျ​ မသတျ​နိုငျ​တာမို့ အနီးစပျ​ဆုံးမိသားစုဝငျ​​တှကေို အဓိက ယုံကွညျ​​ပေးပွီး အကူအညီ​ တောငျး​ပေး​စခေငျြ​ပါတယျ​။ ​
နောကျ​တခုအကွံ​ပေးခငျြ​တာက ​ရှုပျ​​ထှေးလှတဲ့ အခု​ခတျေ​ထဲမှာ ​သမီးမိနျးက​လေးရှိတဲ့ အိမျ​တိုငျးမှာ ​ယောကျြားလူပြို လူအို ဘယျ​သူ့ကိုမဆို ယုံကွညျ​ပွီး တမိုး​အောကျ​ထားမယျ​ဆိုရငျ​ သတိကွီးကွီးထားကွဖို့ လိုလာပွီဆိုတာပါပဲ။
ကိုယျ့​သမီး လစဉျ​ရာသီလာ မလာကို တ​စတေ့​စောငျး အကဲခတျ​ရမှာ လစဉျ​​မေ​မတေို့တာဝနျ​ ဖွဈ​​နပွေီ​နျော​။
ကဲ..ထားပါ​လေ။ အဲ့ဒီ သမီးကွံပါမယျ​ဆိုတဲ့ ​ရှဉောဏျ​ရှငျ​မမ​လေးကို တတျ​သ​လောကျ​မှတျ​သ​လောကျ​နဲ့ ​ဆှေး​နှေးဖိတျ​​ချေါ အကွံ​ပေး အပွီးမှာ ကမြ အခွားလူနာ ဆကျ​ကွညျ့​​နခေဲ့ပါတယျ​။
၁၅မိနဈ​​လောကျ​သာခွားပွီး မမ OG ဝငျ​လာပါတယျ​ မွတျ​သနျ့​​ရေ.. ဒီမှာနငျ့​ case ​ဟေ့.. စိတျ​ပကျြ​လှနျး​ပမေယျ့​ ​ပေါကျ​ကရ​လြှောကျ​လုပျ​ရငျ​ ငါလညျး ဒုက်ခမြားမှာမို့ ကိုယျ​တိုငျ​လာပို့တာ…ဆိုပွီး ၁၆နှဈ​မပွညျ့​​သေးတဲ့​ ကောငျ​မ​လေးတဈ​​ယောကျ​နဲ့ ဝငျ​လာပါတယျ​။.
ရညျးစားလညျးမထားဖူး .. အိမျ​အပွငျ​လညျး ထှကျ​မလညျ​တတျ​တဲ့ က​လေးမ​လေးက ကိုယျ​ဝနျ​ .၄လ​ကြျော​နပွေီမို့ပါတဲ့။​ သူ့အ​မေ.. မမ OG နဲ့ ကမြ အဈ​အောကျ​​မေးလိုကျ​တော့ တရားခံ ထှကျ​လာပါတယျ​။ တရားခံက အ​မရေဲ့ အကိုကွီးပါဆို​တော့ ကမြနှုတျ​က​တောငျ​ ​သွျော​ ..ဘကွီး​ပေါ့ လုပျ​ရကျ​လိုကျ​တာလို့ ငွီးမိပါတယျ​။
ငယျ​​ငယျလေးထဲက ဘဘကလညျးအရမျးခဈြ​ သူကလညျး ဘဘကို အရမျးခဈြ​တာမို့ ဘကွီးက ညအိပျ​ည​နေ သူတို့အိမျ​ကို အလညျ​လာတိုငျး မှာ ဘဘရဲ့အိပျ​ရာထဲမှာ အတူသှားအိပျ​ပါတယျ​တဲ့။ ငယျ​စဉျ​ထဲက​ပေါ့။
ဘဘက ဟိုဟိုဒီဒီစမျး​တော့ သမီးက မလုပျ​ပါနဲ့လို့​ ပွောပါတယျ​တဲ့။ ဒါ​ပမေယျ့​ ဆေးပညာအရ​တော့ အမှနျ​တကယျ​ငွငျးဆိုခွငျး မ​မွောကျ​ဘူး ​ပွောရမယျ​​ပေါ့။ ဘဘကလညျး ခု​နောကျ​ပိုငျး ​ဆေးကုလာတယျ​ဆိုပွီး ခဏခဏ ညအိပျ​ည​နေ လာပါတယျ​တဲ့။
အသကျ​ ၇၀ ဘဘခမြာ ​နသောမ​ကောငျးတယျ​ အစားအ​သောကျ​က​တော့​ ကောငျး​နပေုံပဲ။
ဘယျ​လိုပဲ သ​ဘောတူသညျ​ဖွဈ​​စေ သ​ဘောမတူပဲ လုပျ​သညျ​ဖွဈ​​စေ အဲ့သလို​ ဆှမြေိုးရငျးနဲ့ ကိုယျ​ဝနျ​ရတဲ့ မိနျးမငယျ​​တှဟော ခဈြ​သူနဲ့ ကိုယျ​ဝနျ​ရတဲ့သူ​တှထေကျ​ ပိုပွီး စိတျ​ထိခိုကျ​ခံစားရပွီး ….
အရိပျ​မဲကွီး ပိုကနျြ​ရဈ​ခဲ့ပွီမို့ ​မေ​မတေို့အ​နနေဲ့. ကိုယျ့​သမီးလေး ဘယျ​အရှယျ​မဆို ဘယျ​လို ​ယောကျြားမြိုးနဲ့မှ နှဈ​ဦးထဲလှတျ​မ​ပေး လှတျ​မထား​တော့ပဲ သတိကွီးကွီးနဲ့ ထိနျးသိမျးတတျ​ဖို့ အကွံ​ပေးပါရ​စေ။ ​
နောကျ​ပွီး က​လေး​တှကေိုလညျး မိနျးမကိုယျကို တငျ​ပါးကို ​ပေါငျ​ကို ရငျ​သားကို ​မေ​မနေဲ့ ဖှားဖှားကလှဲလို့ မညျ​သူ့ကိုမှ မပွရ မထိ​တှေ့​စရေ အကိုငျ​တှယျ​မခံရ​ကွောငျး တကယျ​လို့ တဦးဦးက အဲ့သလို လုပျ​လာခဲ့ရငျ​လညျး​ မေ​မတေို့ကို အရငျ​ဆုံး​ပွောဖို့ ငယျ​စဉျ​ထဲက သငျ​ကွား​ပေးဖို့ အကွံ​ပေးရငျး….
ဒီ​နေ့ ကမြကွုံ​တှခေဲ့ရတာ​လေး​တှကေို ဗဟုသုတအဖွဈ​​ မြှ​ဝေ​ပေးလိုကျ​ပါတယျ​။
ပှငျ့​​သောပနျးတိုငျး လှနိုငျ​ ​မှေးနိုငျ​ လနျးနိုငျ​ပါ​စေ။
This Month : 35620
This Year : 177077
Total Users : 536101
Total views : 2425600